သင်ကော ဘယ်လို မြင်လဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » သင်ကော ဘယ်လို မြင်လဲ။
သင်ကော ဘယ်လို မြင်လဲ။
Posted by manawphyulay on Feb 21, 2012 in Money & Finance | 15 comments
money ဆိုတဲ့ ငွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်။ ငွေကြောင့် ဘာတွေပြောင်းလဲသလဲ။ ဒီတော့ အမြင်လေးတွေလည်း လိုချင်ပါတယ်
If he doesn’t get it, he lacks ambition.
ငွေကို အပတ်တကုတ် ကြိုးစားရှာတော့ ကျွန်ဇာတာပါတဲ့သူဆိုပြီး မေးငေါ့ကြပြန်ရော…….
ကဲ သင်ကော ဘယ်လို မြင်လဲ။ ဘာတစ်ခုမှ မကောင်းဘူးနော်။
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းလို့ မြင်ပါတယ်ရှင့်
မေ့နေလိုက်တာ မိပေါက်ထဲက နေ့ပြန်တိုးလေးသွားယူအုန်းမယ်
စိတ်ခံစားမှုအပိုင်းကလွဲလျှင် … ငွေနဲ့ …အရာအတော်များများကို ပြီးမြောက်အောင် အောင်ရွက်နိုင်တယ် … ။
မိန်းမတွေက ..ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ကြလို့ … အသက်ရွယ်ရှိတုန်း … ကိုယ့်တကိုယ်စာ လောက်ငှအောင်ရှာထားသင့်တယ် … မိန်းမတွေ .. အရမ်းကြပ်တည်းလာလျှင် .. ငွေရလွယ်တဲ့ ဟိုဟာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ .. ။
ယောကျာ်းတွေလက်ထဲမှာတော့ ငွေအများကြီး မရှိသင့်ပါဘူး …ယောကျာ်းအများစုက .. လက်ထဲငွေရွှင်တာနဲ့ … သုံးဖြုန်း ပျော်ပါးဖို့ဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားရော… အရင်က … မသုံးတတ် ၊ မစွဲတတ်လည်း .. ပိုက်ဆံလက်ထဲများလာတာနဲ့.. မွေးရာပါ ပညာတတ်လာသလိုပဲ .. မဟုတ်က ဟုတ်က နေရာတွေမှာ သွားဖြုန်းတတ်ကြတယ် …. ။
ပိုက်ဆံရှာရတာ မလွယ်ကူတဲ့လူတွေ ပိုက်ဆံရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိတတ်ကြပြီး … ပိုက်ဆံမရှာဖူးတဲ့ လူတွေ … သိပ်နှမျော တွန့်တိုမှု မရှိတတ်ကြဘူး … ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. ကိုယ်ကတော့ လူမိုက်ပါပဲ.. လူမိုက်နဲ့ငွေ .. အတူမနေဆိုတဲ့ … စကားပုံလေးရှိထားလို့ပါပဲ … ။
မမအိတုံပြောလိုက်မှ ကျနော်တို့ အဖြစ်အကုန်ပေါ်ရော။
မင်းဘာမှမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာ အတော်များများကိုတော့ မင်းလက်ခံရမှာပဲပေါ့…။
money education ကိုနားလည်ရင်
ဗိုက်နာလာလို့ ပြေးပြီဗျို့ ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ် ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်
အကယ်၍များ ‘ငွေ’ က ကျနော်နဲ့ မျက်နှာကြော မတည့်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဆိုပါစို့ … ။
ဒါဆို ကျနော်က ဒီလို ပြောမယ် … ။ အဲဒီ ငွေက ဘာမှ ဟုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ခပ်ရူးရုး တစ်ယောက်ပါ … ဘာကြာကွိကွ .. ဝေဖန်မိမယ် … ။
အကယ်၍များ ‘ငွေ’ က ကျနော် ချစ်ရတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ညီငယ်လေး ဖြစ်မယ် ဆိုပါတော့ …
ဒါဆို ကျနော်က ဒီလိုပြောမယ် … ။ ဟာ … အဲဒီ ငွေ က အရမ်းတော်တာ။ တကယ် လိမ္မာတဲ့ ကောင်လေး .. စသည်ဖြင့် ဘာကြာကွိကွ … ချီးကျူးစကားတွေ ပြောပါမယ် … ။
ငွေဆိုတာ ကုန်စည်ဖလှယ်ဖို့အတွက် ကြားခံအနေနဲ့ သုံးခဲ့တာကနေစခဲ့တာပါ။ သေချာတာက ငွေဆိုတာ လူက ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ လူက ဖန်တီးတဲ့ငွေနောက်ကို လူက ပြန်လိုက်နေရတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ငွေက လူကိုသုံးသွားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လူကငွေကို သုံးတယ်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
တို့က စိန်သော့ ဆိုတော့ ငွေကို သော့လို့ မြင်တယ်။
ဘာမဆို ဖွင့်လို့ရတယ် ။
ဖွင့်မဲ့တဲ့ ခလောက်ကတော့ ဖွင့်မယ်သူနဲ့ ဆိုင်တယ်။
ကောင်းတာတွေ ရွေးဖွင့် မလား ဆိုးတာတွေ ရွှေးဖွင့်မလားပေါ့။ :razz:
မနောလို သက်ကြီးတွေကို ကုသိုလ်လုပ်ပြီး နိဗ္ဗာန်တံခါး ဖွင့်လဲရတာပဲ။ :mad:
ဟိုလူကြီးတွေလို .. ကာရာအိုကေမှာ ငွေသော့နဲ့ …. ဟို xxxxxxxxxx လဲရတာပဲလေ။ (ဆိုင်တံခါးနဲ့ သီချင်းဆိုစက် ဖွင့်တာပြောတာနော် … တစ်မျိုးမတွေးကြနဲ့)
ငွေဆိုတာ .. ရေလို သုံးရင်.. လုပ်သမျှသင့်တယ် …. (ရှေးရှေးက)
ငွေဆိုတာ် .. ရေလိုသုံးရင် .. လုပ်သမျှ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တက်တယ် …. (ယခုခေတ်)
ဆောရီး .. စာလုံးပေါင်းမှားသွားတယ် … လုပ်သမျှတင့်တယ်…
သူကြီးက အက်ဒစ်လုပ်ခွင့်လည်း မပေးတော့ပြန်ဘူး ။။
ခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးနဲ့ အစိုးရလိုပါဘဲလား …. :grin: :grin:
If you follow by money, money go away.
when money looking to you, you can’t run away.
ငွေဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် သည်းခြေကြိုက်တစ်ခုပါပဲ။ မရှိလို့လည်း မဖြစ်ဆိုတော့ ရှာလေ သုံးလေ ကုန်လေပေါ့နော်။ သုံးတာ လွယ်ပြီး ရှာတာခက်တာတော့ တကယ့်ကို မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။